People ousted the Regime ( Evil Empire of Mubarak)ပြည်မြန်မာမှာလဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » 2010/2012/2015 Election » People ousted the Regime ( Evil Empire of Mubarak)ပြည်မြန်မာမှာလဲ
People ousted the Regime ( Evil Empire of Mubarak)ပြည်မြန်မာမှာလဲ
Posted by timothy on Feb 12, 2011 in 2010/2012/2015 Election, Aung San/Aung San Suu Kyi, Events/Fundraise, Myanma News, News, Politics, Issues |3comments
timothy wynn has written 28 post in this Website..
အီဂျစ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ၇ဲ့ အခြေအနေတွေ ရဲ့ကွာခြားချက်တွေကို ကအားမနာတမ်းပြောရ၇ရင် ကွာခြားတဲ့အချက်အတော်များများရှိပါတယ်။ မောင်မိုးညိုလေ့လာမိသလောက် ပြောကြည့်ရအောင်…
(၁) အီဂျစ်မှာ (၁၈) ရက်ထဲနဲ့ နှစ်(၃၀) နီးပါး အာဏာရှင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မူဘာရက်ပြုတ်ကျခဲ့ပေမဲ့၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ (၁၉၈၈) က ရက် (၁၈၀) ကျော်ကြာတဲ့ လူထုအုံကြွမှုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့၊ အာဏာရှင်စနစ်ပျက်သုဉ်းမသွားတဲ့ အပြင်၊ အရင်အာဏာရှင်ဗိုလ်နေ၀င်းက အဖေခေါ်ရလောက်အောင် သူထက်အဆများစွာဆိုးတဲ့ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။
(၂) မီဒီယာတွေမှာသေသေချာချာကြည့်ရင် Tihrar ရင်ပြင်မှာစုရုံးခဲ့တဲ့ အီဂျစ်ပြည်သူကအလွန်ဆုံးရှိ တသိန်းပေါ့။ မြန်မာနိုင်ငံအလံပြဘုရားလမ်းစစ်ရုံချုပ်မှာ စုဝေးခဲ့တဲ့အင်အားက သာယာဝတီ၊ပဲခူး၊ရေနံချောင်းက ခြေကျင်လမ်းလျှောက်ချီတက်ခဲ့ကြသူအာလုံးဟာ (သန်း) ဂဏ်းမရှိတောင်သိန်းများစွာရှိခဲ့ပါတယ်။
(၃) အီဂျစ်မှာမြို့အနှံ့မဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတောရောမြို့ပါမကျန် တောင်တန်းဒေသတွေအနှံ့အုံကြွဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
(၄) မူဘာရက်က လူထုကိုသေနတ်နဲ့ပြစ်ဘို့အမိန့်မပေးခဲ့ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ပါတီညီလာခံမှာကို၊ ဗိုလ်နေ၀င်းက သေနတ်ဆိုတာ…တဲ့တဲ့ပြစ်ရတာလို့ တရားဝင်မိန့်ခဲ့တဲ့အပြင်၊ နယ်တွေသာမက၊ ရန်ကုန်မှာပါလက်နက်အင်အားသုံးတဲ့သာဓကတွေ၊ ဖုံးဖိလို့မရအောင်အတော်များများရှိခဲ့ပါတယ်။
(၄) အီဂျစ်မှာစစ်တပ်က လူထုကြားထဲဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး/စစ်ဦးစီးချုပ်ကိုယ်တိုင် ဆန္ဒပြတဲ့လူအုပ်ကြားကိုယ်တိုင်ဆင်းပြီးဖြောင့်ဖျတဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးကလူထုထဲဆင်းဘို့နေနေသာသာ၊ သူ့အစိုးရအဖွဲ့ကလူတောင်သူ့အနားကပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။
(၅) အီဂျစ်မှာဖြစ်သမျှကိစ္စ ကမ္ဘာကို (internet တွေပိတ်ပင်ထားတဲ့ကြားက) မိနစ်ပိုင်းအတွင်းပျံ့သွားစေပါတယ်။ (၈၈) မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိစ္စ ကမ္ဘာကဒီနေ့အထိမသိတဲ့ဆိုးရွားရက်စက်မှုတွေ၊ ဒီနေ့အထိရှိပါတယ်။
(၆) ရွေးကောက်ပွဲ၊ ဆန္ဒခံယူပွဲစသည်တို့မှာ “ကြိုတင်မဲ”လို့ခေါ်တဲ့ ကြိမ်းသေအနိုင်ရရေးဗျူဟာ။ ကမ္ဘာမှာ မြန်မာကစပြီးအောင်မြင်စွာသုံးခဲ့တာပါ။ လွှတ်တော်မှာ မျက်စိမှိတ်ပြီးမဲထဲ့တောင်၊ အတိုက်အခံတွေဘက်က ကြိမ်းသေပေါက်ရှုံးကိန်းအဖြေထွက်ပြီးသားပါ။
(၇) အီ၈ျစ်မှာ အစိုးရနဲ့အဓိကရုံးတွေက မြို့လယ်ခေါင်လူထုကြားထဲမှာအခြေစိုက်တည်နေကြပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူထုအရောက်မပေါက်ဘ ယ်နည်းနဲ့မှမရှိနိုင်တဲ့ remote နေရာမှာစနစ်တကျအတည်တကအစီစဉ်ျဆွဲပြီးအစိုးရရုံးကြီးအားလုံးအခြေစိုက်ထားပါတယ်။ လူထုအုံကြွမှုကနေပြည်တော်ကိုပေါက်ရောက်ဖို့ကအတော်လေး (အတော်လေး) ကိုခက်ပါတယ်။
(၈) ဒီမိုကရေစီအထွတ်အထိပ်ရောက်ချိန်ဒီလိုအချိန်မှာတောင်လွှတ်တော်အမတ်တွေက ဘယ်နေ့ဘာအစီအစဉ်ရှိလို့၊ ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာသိခွင့်မရှိပါဘူး။ ဒုသမ္မတအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရတဲ့၊ အတွင်းရေးမှူး(၁) ဖြစ်တဲ့သီဟသူရတင်အောင်မြင့်ဦးကိုယ်တိုင်တောင်၊ အဲ့ဒီမနက်မှသူဘယ်သူလဲဆိုတာအဖြေထွက်ပါတယ်။
(၉) အီဂျစ်နိုင်ငံက ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေက စစ်တပ်ကိုနိုင်ငံအာဏာကြိုက်တဲ့အချိန်ကြိုက်သလို သုံးခွင့် ဆိုတာကိုပေးမထားပါဘူး။ သမ္မတက စနစ်တကျလွဲပေးပြီးမှ တာဝန်ယူပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အစိုးရသစ်ပေါ်အောင်လုပ်ပေး၇ပါဦးမယ် (ဒါပေမဲ့စောင့်ကြည့်ကြသေးတာပေါ့) ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ခံရဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်အခြေခံဥပဒေ ကတော့ စစ်တပ်ကို အချိန်မရွေး အာာဏာကိုထိမ်းသိမ်းရယူခွင့်ဆိုတဲ့အခွင့်ထူးကြီးကို အလျံပယ်ပေးထားပါတယ်။ (ယုံချင်ယုံမယုံချင်နေ၊ ဒါကိုလူထု ၉၂ % ကထောက်ခံတယ်ဆိုဘဲ)
(၁၀) စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလအတွင်းလုပ်သမျှကိစ္စ (ဆည်တွေဆောက်တာကအစ၊ လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေ ကိုလက်နက်ကြီးအင်အားသုံးပြီး ပစ်ခတ်ခွင့်ပေးတာအားလုံးကို) လွှတ်တော်က ချီးကြူးထောပနာပြုဘို့ အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။
(၁၁) ဖွဲံစည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ထဲမှာမပါတဲ့ အချုတ်အခြာအာဏာကို ဦးဆောင်မှုပေးဘို့ (ဥသျှောင် အဖွဲ့မဟုတ်တောင်) ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ၀င်နေရာယူထားအုံးမယ်ဆိုဘဲ။
(၁၂) အီဂျစ်သမ္မတက လူထုအုံကြွမှုဖြစ်တကတည်းက ထွက်ဘို့ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့သူစည်းစိမ်ဘီလီယံများ အပြောင်အလဲကိစ္စ သုတ်ိသီးသုတ်ပြာလုပ်ရလို့၊ (၁၈) ရက်ကြာခဲ့ပါတယ်။ ဗိုလ်သန်းရွှေကတော့ လူသိနဲပြီး၊ ငွေကြေးထိမ်းသိမ်းမှုမှာ black marks နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ ဘဏ်များမှာကိုယ်ပိုစီးစိမ်များအတည်တကျနေရာချပြီးမို့၊ သိပ်အဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စပါ။
(၁၃) မူဘာရက်က ကမ္ဘာထိပ်တန်းခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ နေ့စဉ်ရက်ဆက်နာရီမလပ် တိုက်ရိုက်အဆက်အသွယ် ဖုံးစကားပြောတာတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေကတော့၊ ခေါ်မဲ့ပြောမဲ့သူလဲမရှိ၊ နိုင်ငံတကာမပြောနဲ့ အာဆီယံထဲတောင်မျက်နှာပြမရနိုင်တဲ့သိက္ခာတွေ နဲ့ပြည့်နေပါတယ်။ (မတော်တဆ) နိုင်ငံကြီးကခေါင်းဆောင်တွေကဖုံးခေါ်ရင်တောင်။ ပြန်မပြောတတ်လို့ ဖုံးကို ဖုံးခွက်ပေါ် hang-up ပြန်လုပ်ရမဲ့အခြေရှိကြောင်းပါ……….
အီဂျစ်မှာ လူထုအားသက်သက်နဲ့ အပြောင်းအလဲတန်းမဖြစ်တာ ကျေးဇူးတင်ရမယ်။ နို့မို့ရင် ဒေါ်စုနဲ့အန်အယ်ဒီကို လက်ညှိုးထိုး ချီးခြောက်ရေဝိုင်းနှုးလိုက်ကြမယ့်ဖြစ်ခြင်း၊ ဘယ်ပြောကောင်းမလဲ။ ရွာထဲမှာအဲသည်လို….
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာက ကံ-ကံ၏အကျိုးကို ယုံကြည်သူတွေများတယ်လေ
အဲဒီတော့ စစ်အာဏာရှင်တွေ သက်ဆိုးရှည်နေတာပေါ့…
“ကိုယ်ပြုသည့်ကံ ပဲ့တင်သံ… ကိုယ့်ထံပြန်လိမ့်မည်”ဆိုပြီး ကံကိုယုံပြီး ခေါင်းငုံနေသူတွေများတယ်လေ
တပ်မတော်ထဲမှာ အဆင့်အနိမ့်အမြင့် အနည်းငယ် ကွာဟမှုအပေါ်မှာ ဖိနိပ်မှုတွေကတော့ မဆန်းဘူးလေ…
DSA မှာ တနှစ်နောက်ကျတဲ့သူကိုပဲ ကျောင်းသားချင်း ဖိနပ်တိုက်ခိုင်းတဲ့ အနိုင်ကျင့်ဘိုကျတဲ့စနစ်ကို မွေးပေးလာခဲ့တာပဲ
ဒါကြောင့်လဲ ဗိုလ်မှူးကြီးတွေဖြစ်နေပေမယ့် စစ်အာဏာရှင်ကြီးတွေရဲ့ ဖိနပ်သာမက သူတို့ရဲ့ ဇနီးတွေ၊ သားသမီးတွေရဲ့ ဖိနပ်ပါ မရှက်မကြောက် ကိုင်တွယ်ပေးနေရတာပေါ့….
“ဖိလွန်းရင်ကြွ” ဆိုတဲ့ မြန်မာစကားပုံလေးလည်း ရှိတယ်မို့လား… ဒီအတိုင်းဆက်သွားရင်တော့………
မူဘာရက်နောက်ကို လိုက်ရမယ့်သူ ဘယ်သူဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့…….
ကံကိုယုံပြီး ကျွန်တော်တို့ ကြည့်နေကြရအောင်ဗျာ……..